एकैदिनमा कसरी खतराको तह पार गर्‍यो काठमाडौंको वायु प्रदूषणले? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्य अर्थनीति समाचारएकैदिनमा कसरी खतराको तह पार गर्‍यो काठमाडौंको वायु प्रदूषणले?
काठमाडौं, हिजो सोमबारदेखि काठमाडौंवासीले एक किसिमको अप्ठयारो महशुस गरिरहेका छन्। केहीदिन अघि नेपालको पश्चिमी भू-भाग हुँदै भित्रिएको पश्चिमी वायुको प्रभावले सोमबार बिहान यसपालिको पहिलो हिउँदे वर्षा त भयो तर त्यसले आकाश खुलाउन सकेन। मंगलबार पनि बिहानैदेखि घाम देखिएको छैन। हुस्सु लागेजस्तो काठमाडौं धुम्म भएको छ। भिजिबिलिटी घटेको छ। दुई दिनसम्म घाम नलागे पनि काठमाडौं न्यूनतम तापक्रम भने घटेको छैन। बरू पहिलाभन्दा बढेको छ। पुस १६ गते काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ०.८ डिग्री मापन भएको थियो भने आज ९ डिग्री सेल्सियस छ।
तापक्रम बढेसँगै काठमाडौंको वायुको प्रदूषण पनि ह्वात्तै बढेको छ। सोमबार त काठमाडौंको वायु प्रदूषणले खतराको तह नै पार गर्‍यो। वायुको गुणस्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्वुआई)मा मापन गरिन्छ। एक्वुआई ५० सम्म हुनु राम्रो हो, ५० देखि १०० सम्मलाई मोडरेट मानिन्छ। एक्वुआई १५० सम्म पुग्दा संवेदनशील समूहलाई अस्वस्थकर हुन्छ। २०० सम्म पुगे सबैका लागि अस्वस्थ हुन्छ। एक्वुआई ३०० पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण हो। ३ सयभन्दा माथि जानु चाहिँ घातक हो। स्विट्जरल्याण्डको एक्युएआइआरका अनुसार सोमबार साँझ काठमाडौंको एयर क्वालिटी इन्डेक्स ४८७ थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागले देशका विभिन्न ठाउँमा हावाको गुणस्तर नाप्न थालेको ४ वर्ष भयो। ‘हिउँदमा यस्तो त पहिला पनि हुन्थ्यो तर यसपालि त धेरै नै भयो,’ विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले भने, ‘अहिले त यो खतराको लेभलभन्दा निकै माथि छ।’ खासै उद्योगधन्दा नभएको काठमाडौंमा यति ठूलो प्रदूषण कसरी भयो त? पूर्वसचिव तथा मौसमविद् ऋषिराम शर्मा मौसम, काठमाडौंको जनसंख्या र उपत्यकाको भू-बनावटले यस्तो भएको बताउँछन्। ‘पश्चिमी वायु आएपछि इन्भर्सन लेयर बनेर यस्तो भएको हो,’ शर्माले भने।
इन्भर्सन लेयर भनेको जमिनको सतहभन्दा माथिको वायुमण्डल तातो भएर तलको हावा माथि जान नपाउनु हो। मौसमविद् शर्माका अनुसार यसपालि आएको पश्चिमी वायुको प्रणालीमा धेरै पानीको मात्रा थिएन। त्यही भएर बादल लागे पनि काठमाडौं र पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुन सकेन। ‘जमिन छिटो सेलाउँछ र छिटो तात्छ, तर चिसो भएको वायुमण्डलको तापक्रम तात्न समय लाग्छ,’ शर्माले भने,‘राति चिसो भएको जमिनको सतह बिहान भएपछि ता’त्दै गयो तर माथिको हावा त्यसरी नतातेकाले काठमाडौंको हावा बाहिर जान पाएन।’ कचौंरा आकारजस्तो उपत्यका भएकाले पनि काठमाडौंमा यस्तो बेला हावा बाहिर जान नसक्ने शर्माले बताए।
‘वायुमण्डलको माथिल्लो तहको हावाले काठमाडौंको सतहको हावालाई लैजान सक्दैन। त्यसैले पनि यो यहीँ घुमिरहन्छ,’ उनले भने। रिलिज हुन नपाएको काठमाडौंको हावामा गाडी मोटर, इँटाभट्टाको धुँवा र धुलो मिसिएकाले प्रदूषण ह्वात्तै बढेको उनले बताए। ‘यो नयाँदिल्ली, बेइजिङको जस्तो औद्योगिक उ’त्सर्जनले भएको नभई मौसमका कारण भएको प्रदूषण हो,’ शर्माले भने,‘यो हट्न कि घाम लाग्नुपर्छ, हावाहुरी चल्यो वा अलि ठूलो पानी पर्‍यो भने पनि आफैं हटेर जान्छ।’ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबारसम्म पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने बताएको छ।
काठमाडौं यही अवस्थामा रहने भएकाले सरकारले नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ। वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक जोशीले आमनागरिकलाई अत्यावश्यक नपरी बाहिर ननिस्कन, बुढाबुढी र बालबच्चाको विशेष ख्याल गर्न, सकभर कम गाडी चलाउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। ‘सबभन्दा ठूलो कुरा त आगो बाल्नु भएन। त्यसमा पनि फोहोर जलाउँदा हावामा प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ,’ जोशीले भने,‘एक-दुई दिन यसो गरे ठिक हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। त्यसपछि पनि यस्तै अवस्था रहे थप सतर्कता अपनाउनु पर्छ।’